समाचार - APP लुगदी मिल मा हिंड्नुहोस् र हेर्नुहोस् कसरी रूख लुगदी बन्छ?
APP लुगदी मिल मा हिंड्नुहोस् र हेर्नुहोस् कसरी रूख लुगदी बन्छ?
वृक्ष बाट कागज मा जादुई रूपान्तरण बाट, यो कुन प्रक्रिया को माध्यम बाट गयो र यो कथा को कस्तो प्रकार को थियो? यो सजिलो काम हैन। त्यहाँ मात्र प्रक्रियाहरु को तहहरु, तर पनि उच्च मापदण्ड र सख्त आवश्यकताहरु छन्। यस पटक, हामीलाई0देखि 1 सम्म कागज अन्वेषण गर्न को लागी एपीपी को लुगदी मिल मा हिंड्न दिनुहोस्।
कारखाना मा प्रवेश गरे पछि, काठ को कच्चा माल लम्बाई मा काटिएको छ कि उपकरण को आवश्यकताहरु लाई पूरा, र तब कोट (छाल) कि लुगदी गुणस्तर को लागी अनुकूल छैन बन्द छीलिएको छ। वर्दी र उच्च गुणस्तरीय काठ चिप्स एक बन्द संदेश प्रणाली को माध्यम बाट काठ चिप पकाउने खण्ड पठाइन्छ। बाँकी काठ चिप्स कुचल र बिजुली उत्पादन गर्न बायलर मा जलाइन्छ। पानी वा प्रशोधन को समयमा उत्पादन अन्य सामग्री बिजुली वा भाप मा पुनर्नवीनीकरण गरिनेछ।
Pulping को प्रक्रिया खाना पकाउने, अशुद्धिहरु को हटाउने, लिग्निन को हटाउने, ब्लीचिंग, पानी को निस्पंदन र गठन, आदि टेक्नोलोजी को परीक्षण अपेक्षाकृत उच्च छ, र प्रत्येक विवरण कागज को गुणस्तर लाई प्रभावित गर्दछ।
पकाएको काठ लुगदी अक्सिजन डिलिग्निफिकेशन सेक्सन मा पठाइएको छ अशुद्धता स्क्रीनिंग सेक्सन मा हटाइएको छ, जहाँ काठ लुगदी मा लिग्निन फेरि हटाइएको छ, ताकि लुगदी राम्रो ब्लीच क्षमता छ। तब उन्नत चार चरण ब्लीचिंग सेक्सन मा प्रवेश गर्नुहोस्। तत्व रहित क्लोरीन को, र त्यसपछि उच्च दक्षता प्रेस लुगदी धुने उपकरण संग संयोजन उत्पादन पल्प स्थिर गुणस्तर, उच्च सफेदी, उच्च सफाई, र उच्च भौतिक गुणहरु को विशेषताहरु छन् भनेर सुनिश्चित गर्न।
काठ चिप पकाउने प्रक्रिया को समयमा, गाढा खैरो तरल को एक ठूलो मात्रा (सामान्यतया "कालो रक्सी" को रूप मा जानिन्छ) alkaline lignin युक्त उत्पादन गरिन्छ। कालो रक्सी को उपचार को कठिनाई लुगदी र कागज उद्यम मा प्रदूषण को मुख्य स्रोत बनेको छ।
उन्नत क्षार रिकभरी प्रणाली तब वाष्पीकरण को माध्यम बाट मोटी सामाग्री ध्यान केन्द्रित गर्न को लागी प्रयोग गरीन्छ र त्यसपछि बायलर मा जलाउँछ। उत्पादित उच्च दबाव भाप बिजुली उत्पादन को लागी प्रयोग गरीन्छ, जो लुगदी उत्पादन लाइन को बिजुली को आवश्यकताहरु को लगभग 90% पूरा गर्न सक्छ, र मध्यम र कम दबाव भाप उत्पादन को लागी पुन: उपयोग गर्न सकिन्छ।
एकै समयमा, pulping प्रक्रिया मा आवश्यक क्षार पनि क्षार रिकभरी प्रणाली मा पुनर्नवीनीकरण गर्न सकिन्छ। यसले न केवल उत्पादन लागत घटाउँछ, तर पर्यावरण संरक्षण, ऊर्जा संरक्षण र उत्सर्जन मा कमी लाई पनि प्राप्त गर्दछ।
गठन लुगदी बोर्ड एक निश्चित वजन र आकार को विशिष्टता मा एक कागज कटर द्वारा काटिएको छ, र त्यसपछि प्रत्येक प्याकेजि line्ग लाइन मा ढुवानी गरीएको छ।
यातायात को सुविधा को लागी, कन्वेयर बेल्ट मा समाप्त लुगदी बोर्डहरु छन्, र ती सबै सफेदी र प्रदूषण मूल्या after्कन पछि बाहिर स्क्रीनिंग गरीएको छ।
उपकरण मूल रूप बाट पुरा तरिकाले स्वचालित संचालन हो, 3,000 टन को एक दैनिक उत्पादन संग। मेशिन मर्मत को समयमा बाहेक, अन्य समय निर्बाध संचालन मा छन्।
अर्को रोल प्याकर लुगदी बोर्ड कम्पैक्ट पछि, यो कागज को एक परत संग प्याकेजि and्ग र ढुवानी संचालन को सुविधा को लागी, र पल्प बोर्ड को दूषित बाट बच्न को लागी यातायात को समयमा लपेटिनेछ।
तब देखि, inkjet मिसिन धारा संख्या, उत्पादन मिति, र लुगदी बोर्ड को लागी QR कोड स्प्रे। तपाइँ "चेन" भाँचिएको छैन भनेर सुनिश्चित गर्न को लागी कोड स्प्रे को जानकारी मा आधारित लुगदी को उत्पत्ति ट्रेस गर्न सक्नुहुन्छ।
तब स्ट्याकर आठ साना झोला एक ठूलो झोला मा स्ट्याक, र अन्त मा यो एक strapping मिसिन, जो फोर्कलिफ्ट संचालन र अफलाइन र गोदाम पछि गोदाम अपरेसन अपरेसन को लागी सुविधाजनक छ संग फिक्स गर्दछ।
यो "लुगदी" लिंक को अन्त्य हो। वन रोपेर र लुगदी बनाइसकेपछि, अब कागज कसरी बन्छ? कृपया अनुगमन रिपोर्ट को लागी पर्खनुहोस्।